Kidsguard Apk Download ho an'ny Android [ho an'ny ray aman-dreny amin'ny 2022]
Salama daholo, ray aman-dreny ve ianao ary te-hifehy ny fitaovan'ny zanakao? Raha eny, dia eto izahay miaraka amina fampiharana Android mahatalanjona ho anao rehetra, izay fantatra amin'ny anarana hoe Kidsguard Apk. Io no fampiharana Android farany, izay ahafahanao mifehy ny telefaona findainao sy ny maro hafa.
Araka ny fantatrao, ny fitaovana Android dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hifandraisana amin'izao tontolo izao. Saingy misy lafiny maizina foana amin'ny zavatra tsara rehetra. Raha ray aman-dreny ianao dia avy eo ny fividianana finday ho an'ny zanakao dia fanapahan-kevitra tsara, fa ny fampiasana ny finday kosa miankina amin'ny zaza. Afaka mampiasa azy ny ankizy, araka izay tiany.
Noho izany, misy olona ratsy sy atiny manerantany. Ka ny famonjena ny zanakao amin'ny olona ratsy sy ny atiny ratsy dia azonao fehezina. Azo atao izao ny mifehy ny fitaovana Android an'ny zanakao, tsy mikasika azy io. Azo atao izao amin'ny fampiharana Android ity.
Manolotra izy hanome ny fampahalalana rehetra, momba ny findainao ny zanakao ary hanome endrika hafa koa. Io no fomba tsara indrindra hijerena ny zanakao, na aiza na aiza halaviran'izy ireo aminao. Te hahafantatra bebe kokoa momba izany ve ianao? Raha eny dia mijanona miaraka aminay, satria hizara izany rehetra izany izahay.
Topimaso momba ny Kidsguard Apk
Izy io dia rindranasa Android, izay natao manokana ho an'ny ray aman-dreny hifehezana ny telefaonan'ny zanany. Manome ny fidirana rehetra amin'ny finday izany, hahafantaran'ny mpiambina ny momba ny zanany rehetra.
Manome fifehezana SMS izany, amin'ny alalanao ihany koa dia hahazo ny hafatra an-tsoratra rehetra tonga, ny fotoanan'ny hafatra, ny daty, ary na dia ireo hafatra voafafa aza. Kidsguard Pro Apk dia manome ny fampahalalana ilaina rehetra momba ny hafatra tokana, amin'izay hahafantaranao ny momba ny fifandraisan'izy ireo amin'ny fifandraisana hafa.
Kidsguard App dia manome ny fampahalalana rehetra momba ny Contacks. Izay fifandraisana nampiana na nesorina dia haseho anao koa. Haneho ny fampahalalana rehetra momba ny lisitry ny fifandraisana izany. Izy io dia mifehy ny antso aza, amin'izay hahazoanao ny fampahalalana mifandraika amin'ny antso. Izy io dia manome log de ligne, data sy fotoana, faharetana, ary na ny làlan'ny antso aza.
Apps, amin'ny alàlan'ity fampiharana ity, azonao atao ihany koa ny mifehy ny fizotry ny fametrahana apps. Mila fahazoan-dàlana ny zanakao hametraka fampiharana Android vaovao amin'ny fitaovany. Azonao atao ihany koa ny manakana ireo fampiharana sy antso mba hisorohana ny fandaniana fotoana.
Iray amin'ireo fiasa tsara indrindra amin'ity rindrambaiko ity ny telefaona mihidy, izay ahafahanao manidy ny fitaovany. Azonao atao ny manidy ny fitaovan'izy ireo raha ampiasain'izy ireo tsy ilaina izy io, izay misy fiatraikany amin'ny fianarany na amin'ireo hetsika ara-pahasalamana hafa. Manome ny toerana misy ny zanakao mihitsy aza izy io.
Misy endri-javatra maro hafa ao amin'ity fampiharana ity, azonao zahana. Fantatrao fa tsy dia maimaimpoana mihitsy ireo fiasa marobe ireo. Malalaka ny fametrahana ny Kidsguard Premium, saingy tsy maintsy mividy endri-javatra premium ianao hahazoana azy ireo. Fantatrao fa ity ilay fampiharana, izay tokony apetraky ny ray aman-dreny rehetra hifehezana ny fampiasana finday tsy ilaina.
Anaran'ny fonosana pro.kidsguard
Ny sasany amin'ireo fiasa amin'ity rindrambaiko ity dia voalaza ao amin'ny fizarana etsy ambony, fa misy maro hafa. Azonao atao ihany koa ny mahita azy ireo, amin'ny alàlan'ity fampiharana ity. Izahay dia hizara ny sasany amin'ireo tena mampiavaka an'ity fampiharana ity aminao rehetra ao amin'ny lisitra eto ambany.
Controller finday tsara indrindra
Mifehy hafatra, antso ary fampiharana
Hidio ny findain'izy ireo
Fomba fiasa karama
Call Monitor Monitor
Tsy misy io ao amin'ny Google Play Store, fa eto ho anao rehetra izahay. Hizara rohy azo antoka sy miasa izahay hampidinana ity fampiharana ity aminareo rehetra. Azonao atao ny misintona an'ity rindranasa ity amin'ity pejy ity. Tadiavo fotsiny ny bokotra fampidinana ary kitiho eo amboniny. Hanomboka ho azy ny fisintomana.
Kidsguard Apk no fampiharana tsara indrindra hananana fifehezana ny fampiasana diso ny findain'ny zanakao. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary mahazo fidirana tanteraka amin'ny alàlan'ny fitaovan'izy ireo ihany koa. Raha mila fampiharana misimisy kokoa, tsidiho hatrany ny tranokalanay.
Sokajy Apps, fitaizana Tags Kidsguard Apk, Kidsguard Premium, Kidsguard Pro Apk Post Fikarohana
Granny Outwitt Mod Apk Download Ho an'ny Android [2022 Mod]